မျိုးမင်း၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
မျိုးမင်း's Apps (1)
ဝနပ္ပဂုမ္ဗေ ယထ ဖုဿိတဂ္ဂေ၊
ဂိမှာနမာသေ ပဌမသ္မိံဂိမှေ။
တထူပမံ ဓမ္မဝရံ အဒေသယိ၊
နိဗ္ဗာနဂါမိံပရမံ ဟိတာယ။
ဧတေန သစ္စေန သုဝတ္ထိ ဟောတု။
(ခု-၁-၇၊ ခု-၁-၃၁၄ - ရတနသုတ်။)
ဂိမှာနံ = နွေလတို့၏။
ပဌမသ္မိံဂိမှေ = ရှေးဦးအစ နွေလဖြစ်သော။
မာသေ = စိတြမာသ တန်ခူးလ၌။
ဖုဿိတဂ္ဂေ = ပင်လုံးကျွတ်ပွင့်သော ခက်ဖျားစုံရှိသော။
ဝနပ္ပဂုမ္ဗေ = တောအုပ်သည်။
သသိရီကော ယထာ = အသရေ ရှိလှဘိသကဲ့သို့။
တထူပမံ = အနက်သဒ္ဒါ ပန်းစုံစွာဖြင့် ဝေဆာပြန့်ပြော ထိုတော အုပ်လျှင် ပုံပမာရှိသော။
နိဗ္ဗာနဂါမိံ= အငြိမ်းဓာတ်မှန် မြတ်နိဗ္ဗာန်သို့ ဧကန်ထုတ်ချောက်ရောက်ခြင်း၏ အကြောင်းဖြစ်သော။
ဓမ္မဝရံ = သုံးပုံပိဋကတ် တရားမြတ်ဒေသနာတော်ကို။
ပရမံ ဟိတာယ = လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တဝါတို့၏ နိဗ္ဗာနဓာတ်တည်းဟူသော အမြတ်ဆုံး အကျိုးစီးပွားချမ်းသာအလို့ငှာ။
အဒေသယိ = ကရုဏာ ရှေ့သွား မေတ္တာထား၍ ဟောကြားတော်မူအပ်ခဲ့လေပြီ။
ဗုဒ္ဓေ = သုံးလောကထွဋ်ထား ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၌။
ဣဒမ္ပိ ရတနံ = ဤ မြတ်နိုးဖွယ်ရာ ရတနာအဖြစ် သိသာဖွယ်အကြောင်း နှစ်သက်ဖွယ် ဂုဏ်တော်အပေါင်းသည်လည်း။
ပဏီတံ = ထူးမြတ်တော်မူလှပါပေ၏။
ဧတေန သစ္စေန = ဝစီမင်္ဂလာ ဤသစ္စာစကားကြောင့်။
တုမှာကံ = သင်မိတ်ဆွေအပေါင်း သူတော်ကောင်း တို့အား။
ပါဏီနံ = အပေါင်းများစွာ သတ္တဝါတို့အား။
သုဝတ္ထိ = ဘေးရန်ကုန်ကင်း ချမ်းသာအေးမြခြင်းသည်။
ဟောတု = မုချမသွေ ဖြစ်ပါစေသတည်း။ ။
pa auk loco
အညှီ အဟောက်ဆိုတာ ဘာကိုခေါ်သလဲ ?( အာမဂန္ဓသုတ်)
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 30, 2012 တွင်12:43am —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
ကောင်းစွာ ပြုစီရင်ပြီး ကောင်းစွာ ချက်ပြုတ် ပြီးဆုံးပြီးသောသူတစ်ပါးတို့…
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 4, 2012 တွင်6:29pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment0Likes
ရဟန်းတို့ ...များပြားသော ဈာန် မဂ်ဖိုလ် နိဗ္ဗာန်၏ တိုက်ရိုက် ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်သော တိရစ္ဆာနကထာ စကားကို မပြောကုန်ရာ။ ယင်း တိရစ္ဆာနကထာစကားကား အဘယ်နည်း? ----
၁။ ရာဇကထာ = မင်းနှင့် စပ်သောစကား,
၂။ စောရကထာ = ခိုးသား ဓားပြနှင့် စပ်သောစကား,
၃။ မဟာမတ္တကထာ = အမတ်ကြီး (ဝန်ကြီးချုပ်)နှင့် စပ်သောစကား,
၄။ သေနာကထာ = စစ်သည် (စစ်တပ်)နှင့် စပ်သောစကား,
၅။ ဘယကထာ = ကြောက်မက်ဖွယ်နှင့် စပ်သောစကား,
၆။ ယုဒ္ဓကထာ = စစ်ထိုးခြင်း (တိုက်ပွဲ)နှင့်…
**တာလပုဋသုတ်**( ဇာတ်သဘင်သည်များ သေသည်၏ နောက်)
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 4, 2012 တွင်6:21pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။0Comments0Likes
အခါတစ်ပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ရာဇဂြိုဟ်ပြည်၌ ရှဉ့်နက်တို့အား အစာပေးကျွေးရာ ဖြစ်သော ဝေဠုဝန်ကျောင်း၌ (သီတင်းသုံး) နေတော်မူ၏၊ ထိုအခါ တာလပုဋမည်သော ဇာတ်ဆရာကြီးသည်မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ချဉ်းကပ
်ပြီးလျှင် မြတ်စွာဘုရားကို ရှိခိုး၍ တစ်ခုသော နေရာ၌ ထိုင်နေပြီးသော် ဤ့စကားကို လျှောက်၏ - ''မြတ်စွာဘုရား 'ပွဲအလယ် သဘင်အလယ်၌ မှန်မမှန်အားဖြင့် လူအပေါင်းကိုရွှင်ပျမွေ့လျော်စေသော ကချေသည်သည် ခန္ဓာပျက်ကြွေ သေပြီးသည်မှ နောက်၌ ပဟာသမည်သော နတ်တို့၏ အသင်းဝင် ဖြစ်ရ၏ 'ဟု…
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 4, 2012 တွင်6:04pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment3Likes
တချိန်သောအခါ မြတ်စွာဘုရားသည် နဠေရုမည်သော တမာပင်ရင်း၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူ၏။ အဲဒီအချိန်ခါမှာ ပဟာရာဒလို့ခေါ်သည့် အသူရိန်ကမြတ်စွာဘုရားထံသို့ ရောက်လာပြီး “မြတ်စွာဘုရား၏ သာသနာတော်မှာ ရဟန်းတော်တွေမွေ့လျော်နေကြတာ အဘယ်အံ့ဖွယ်တွေရှိနေလို့ ပျော်မွေ့နေကြတာလဲ” ဟု သိလို၍မေးလို၍ ရောက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
်း မြတ်စွာဘုရားထံသို့ ရောက်လာသည့်အခါကြတော့ မြတ်စွာဘုရား၏ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော်တွေ၊မြတ်စွာဘုရား၏ ဘုန်းကံကြီးမားပုံတွေကို တွေ့မြင်ရသောကြောင့်…
12:11pm အချိန်သြဂုတ် 17, 2012, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။